Articles	Zvorwadza ruling postponed
Last Updated on 04 April 2012	Hits: 1506	Harare Magistrate, Victoria Mashamba has failed to bring to finality the trial of Sten Zvorwadza, Restoration of Human Rights (ROHR) Zimbabwe Spokesperson who is facing charges of threatening to commit murder and undermining state authority in contravention of Section 186 of the Criminal Law Codification and Reform Act. As has become the norm in Zimbabwe's judiciary system, the ruling was postponed to the 10th of April 2012 after the Magistrate said that she had not seen the Application for Discharge papers filed by the Defense.
The charges against Zvorwadza emanate from an altercation with ZANU PF supporters in Mbare on the 28th of January 2012 following disruptions of an underground fuel tank installation project which he was carrying out in the area. Zvorwadza reported the case at Mbare Police Station before he was arrested for allegedly threatening ZANU Pf thugs, Clifford Mazarura and Clever Ntabande with murder. The ROHR Spokesperson was incarcerated at the condemned Matapi Police cells where he was allegedly assaulted by Constable Mberi.
Commenting on the charges leveled against him, Zvorwadza said, "Zimbabwe is a free nation where people have the right to start businesses wherever they want and should not be restricted on political grounds €. Mbare has been declared Zanu pf territory retarding development as many investors shy away from the area fearing disruption to their businesses by Zanu pf youths and terror groups including the infamous Chipangano who roam the streets. In Mbare, Chipangano has virtually taken over most council operations on the grounds that they own the area. Contact US